Indlela yokwenza incwadana: amanyathelo okuyila incwadana kunye neminye imizekelo | Abadali be-Intanethi
Ukuba sithetha ngoyilo lwegraphic, sikwathetha malunga noyilo lokuhlela. Uyilo loHlelo yiyo yonke into ebandakanya uyilo kunye nolwakhiwo lomxholo othile ukudala indawo enokubakho yentengiso. Yiyo loo nto kule posi, siza kukwazisa kwihlabathi loyilo lokuhlela, ngakumbi kwihlabathi leencwadana.
Ngaba wakha wacinga ngendlela eziyilwe ngayo iincwadana zentengiso ezisingqongileyo nezisinceda sihlale sinolwazi? Njengokuba, Kule posi asiyi kukucebisa kuphela malunga nendlela yokuyila incwadana, kodwa siza kukubonisa eminye yeyona mizekelo ilungileyo, ukuze ube nokuphefumlelwa kwaye ikuncede ukhethe i-typology elungele uhlobo lwakho lomsebenzi.
1.1 Iintlobo ze-triptychs
2 Iingcebiso okanye iingcebiso zokwenza i-triptych
2.5 Uhlahlo lwabiwo mali
3 iinkqubo zokuyila
3.2 Ulwalamano loMpapashi
3.3 Umshicileli we-Microsoft
Umthombo: Ixesha leSitudiyo
Kwimeko apho awukayazi ukuba yintoni i-triptych, kubalulekile ukuba uqonde kuqala ukuba yintoni na ukuze uyile kwaye uyenze. i triptych luhlobo lwencwadana yolwazi, kuthiwa inolwazi kuba iyasazisa kwaye idlulisa umyalezo ofanelekileyo malunga nento ethile.
Kukho iincwadana ezivakalisa iziganeko kwaye zazise malunga nesiganeko okanye iincwadana ezichazela malunga nenkampani ngokubanzi, kwaye ngale ndlela banokunika uluntu yonke idatha efunekayo. Ngamafutshane, i-triptych isinceda ukuba sihlale sinolwazi kwaye, ngaphezu koko, zibonakaliswa ngokwahlulwa zibe ngamacandelo amathathu.
Olona phawu lubalulekileyo kolu hlobo lwencwadana kukuba yahlulwe yangamacandelo amaninzi, ukuhanjiswa kolwazi kubekwe ngcono kakhulu, ngoko ke umfundi akanangxaki xa kufuneka aqonde oko akufundayo, ekubeni ukuba iyilwe ngokuchanekileyo, icandelo ngalinye lomzobo libekwe ngokugqibeleleyo.
I-triptych yentengiso, njengoko igama layo libonisa, unoxanduva lokwazisa okanye ukunika ingxelo ngento ethile. Umzekelo, umsebenzi wayo ophambili uya kuba kukukholisa okanye ukucenga umthengi ukuba athenge okanye atye uhlobo oluthile lwemveliso. Olu hlobo lwencwadana luhlala lubonwa kumacandelo afana nevenkile, iikhefi, iihotele okanye abalungisi beenwele.
Ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zinto zibalulekileyo zeendaba ezingaxhunyiwe kwi-intanethi.
Ipropaganda triptych inokubonakala ifana naleyo yangaphambili, kuba bobabini banomsebenzi ophambili ofanayo: ukweyisela uluntu ngento ethile. Eyona nto mhlawumbi eyahlukayo kuleyo yangaphambili kukuba ayidli ngokwabelana ngendawo enye.
Kwakhona, xa sithetha ngepropaganda okanye intengiso, Asikholisi kuphela umthengi ukuba imveliso yethu ibalulekile kwaye ke kufuneka idliwe, kodwa sikwameyisela ekubeni indlela esicinga nesenza ngayo ngendlela esithengisa ngayo ichanile yaye kungenxa yoko le nto ufanele ayisebenzise.
Xa sithetha nge-triptych yobugcisa, sisuka kude nayo yonke into enolwazi. Olu hlobo lweencwadana, Banoxanduva lokucenga umxhasi ngokusebenzisa izinto zegraphic. Ngaphandle kwamathandabuzo, ziyinxalenye yombuzo esikhe sizibuze wona ngamanye amaxesha: umfanekiso okanye umzekeliso unokutsala njani ingqalelo yoluntu?
Iingcebiso okanye iingcebiso zokwenza i-triptych
Ngaphambi kokuba uqale ukuyila, kubalulekile ukuba ucace gca ezona njongo ziphambili kutheni kufuneka uyiyile. Xa sithetha ngeenjongo, sibhekisela kwinjongo eya kuyilwa ngayo, ukuba luhlobo luni loluntu oluya kuqondiswa, kunye noluphi uhlobo lwethoni esiya kunxibelelana noluntu lwethu malunga nemveliso okanye inkampani. Luluphi ulwazi esicinga ukuba luya kubaluleka ngakumbi kwaye lunomdla ekunikezeni okanye nokuba sinokumcenga njani umxhasi ukuze incwadana yethu ingabonakali.
Nje ukuba ube nempendulo ecacileyo kwimibuzo ebesiyicebisile ngaphambili, kuyafuneka ukuqhubela phambili kwimiba yobugcisa engaphezulu. Umzekelo, inkalo yobugcisa obuhle iya kuba yintoni uhlobo lwetemplate okanye igridi Kufuneka ndigcine ulwazi kwindawo ethile okanye kwibhokisi yokubhaliweyo yencwadana yam.
Loluphi uhlobo lohlobo olunokuba lulungile kwincwadana yam ukuba ijongana ngenene nesihloko esithile kwaye kufuneka ndibambe ingqalelo ngelixa isebenza kwaye ifundeka. Yeyiphi imibala endiza kuyisebenzisa ukuze ihambelane ngokwasengqondweni nolwazi kwaye yeyiphi imizobo endiza kuyisebenzisa.
Xa siyila incwadana enemifanekiso yenkampani ethile, sikwaxelela uluntu ngeenjongo eziphambili inkampani eza kuba nazo kunye nemilinganiselo yayo. Kodwa ukuba kukho into enye esivumelana ngayo sonke, kukuba i-triptychs ayisebenzisi nje ukunxibelelana nemiyalezo kunye nokwazisa, kodwa kunye nokutsala kunye nokukholisa.
Ngaphambili siye saphawula ukuba kwii-triptychs zentengiso injongo kukuba umxhasi uthenge okanye atye imveliso yethu. Ewe, kulapho into esiyaziyo njengentengiso ingena khona. Ukuyila amaqhinga kunye nokucwangcisa kwincwadana yakho kuya kwenza uluntu lusondele ngakumbi kuwe kunye nemveliso yakho.
Imithombo yeendaba ibalulekile xa ususombulule zonke iingongoma zangaphambili, kuba oku, kubalulekile ukuba ungathatheli ingqalelo kuphela indlela yokukhuthaza okanye ukukholisa, kodwa nakweyiphi imidiya oza kuyenza.
Yiyo loo nto, ngaphandle kwento yokuba i-triptych ikwayindawo yentengiso, ikwabalulekile, kwaye inika umdla, ukuba ubandakanye imidiya eyahlukeneyo oza kuyisebenzisa. Ngale ndlela awazisi kuphela oko kubaluleke ngokwenene, kodwa nokuba zeziphi iindawo ozenzayo.
Uhlahlo lwabiwo mali
Kwaye okokugqibela kodwa okungakuncinananga, kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo uhlahlo lwabiwo-mali lokuqala oceba ukulusebenzisa kunye nendlela yokulawula nganye yezinto ozibandakanyayo. Ukuba sithetha ngohlahlo lwabiwo-mali, sinokwenza isixa sazo zonke izixhobo eziye zayimfuneko ukubandakanya kwindalo yethu kunye nenkqubo yokuyila: iikhomputha, iimvavanyo zokushicilela, iitemplates, njl. Zonke ezi zinto kufuneka zithathelwe ingqalelo, ukongeza kwixesha otyale ngalo kwinto nganye kuzo. Yiyo loo nto sicebisa ukuba ulwahlule uhlahlo lwabiwo-mali lube ngamacandelo ahlukeneyo: icandelo lophando kunye nohlalutyo, inxalenye yengqiqo kunye nenxalenye yengcamango.
Nanini na xa sithetha ngeenkqubo zoyilo kunye noyilo, le ikwi-10 ephezulu kwaye iphakathi kweyokuqala kwitheyibhile. I-InDesign yinkqubo eyinxalenye yoluhlu olubanzi lweenkqubo eziyinxalenye ye-Adobe. I-drawback kuphela kukuba yinkqubo efuna iindleko zenyanga okanye zonyaka.
Ixabiso aliphezulu kakhulu, kuba kungekuphela nje le nkqubo ifakiwe kodwa kunye nezinye ezininzi eziya kukunceda ukuba uzinikele ekuyileni. Iqinisekile Yinkqubo efanelekileyo yoyilo, inethuba lokuyila iigridi zakho kunye noluhlu olubanzi lweefonti.
Ukuba sikuqinisekisile nge-InDesign, ngale nkqubo siya kukukholisa ngokuphindwe kabini, kuba yinkqubo yoyilo engadingi mrhumo, kufuneka uhlawule kuphela imali engabizi kakhulu kuba inelayisensi.
Into ephawula le nkqubo kukuba unofikelelo kuluhlu olubanzi lweefonti, imifanekiso kunye negraphic element zazo zonke iintlobo. Yeyona nkqubo igqibeleleyo ukuba ujonge iyantlukwano kwiiprojekthi zakho kwaye ukwazi ukusebenza ngendlela ekhululekileyo.
Umshicileli weMicrosoft yinkqubo yokupapasha yedesktophu yeMicrosoft ngokugqwesileyo. Awunayo kuphela ukhetho lokudala uyilo olunento yokwenza noyilo lomhleli, kodwa endaweni yoko, yayiyilwe ngenjongo yokuyila kunye nokudala izinto ezinophawu lwentengiso ngakumbi.
Ngamafutshane, ukuba ungumbhali kwaye unomdla wokuyila kunye nokwandlala iimagazini okanye iincwadi, yinkqubo egqibeleleyo. Ukongeza, inokusebenza ngokulula ngokulula, nto leyo evumela ukuba umsebenzi ube manzi kakhulu. Awunakuphoswa lo mboniso nangantoni na ehlabathini.
IScribus yinkqubo yokupapasha idesktop kwaye ikwajongwa njengohlobo lwesoftware ekhutshwe ngokupheleleyo. Ikwayinkqubo efanelekileyo ukuba ujonge uyilo lweemagazini okanye iincwadi. Yintoni ebonakalisa le nkqubo kakhulu, kukuba ungasebenzisa phakathi kweelwimi ezininzi okhoyo, ke ngoko, ilungile kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Kukwakho ithuba lokukwazi ukusebenza nezinye iifomati ezinomdla kakhulu, ezinje ngefomathi yeSVG. Ukongeza, ungaphinda uhlele iifonti ngokuthanda kwakho kunye Ineeprofayile zemibala ezimbini ezibalulekileyo zokuthumela ngaphandle imisebenzi yakho: CMYK kunye neRGB.
Ukuyila incwadana enemifanekiso ngumsebenzi odla ixesha kodwa akukho lula ukuba uwathathela ingqalelo amanye amacebiso esiwacetyisiweyo. Ukwenza inqanaba lophando lokuqala elilungileyo kubalulekile ukuphuhlisa uyilo, njengoko kuyinxalenye yenkqubo yokuyila kunye neengcinga ezilandelayo.
Ngamafutshane, khetha isihloko ofuna ukuthetha ngaso kwaye uhlale ukhumbula eminye yemibuzo enokukunceda wenze incwadana yakho igqibelele kwaye isebenze. Kwaye ukuba unokuthandabuza, kubalulekile ukuba uphefumlelwe lolunye uyilo olunokukunceda uphucule.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Indlela yokwenza i-triptych
Amakhadi omhla wokuzalwa wasimahla ukuze uwakhuphele